warkii.com » Mid ka mid ah shaqaalaha Sara Ali Khan oo laga helay coronavirus… (Waa sidee xaaladda atariishadan iyo qoyskeeda?)
Mid ka mid ah shaqaalaha Sara Ali Khan oo laga helay coronavirus… (Waa sidee xaaladda atariishadan iyo qoyskeeda?)
Waxaa maalmihii ugu dambeeyay cudurka coronavirus uu aafeeyay qoysas caan ka ah Bollywood-ka sida qoyska reer Bachchan iyo reer Kher inkastoo Anupam Kher uu hareer maray xanuunkan, balse waxaa uu ku dhacay xubno ka tirsan qoyskiisa sida Hooyadii.
Darawalka atariishada lagu magacaabo Sara Ali Khan ayaa laga helay cudurka COVID-19, balse nasiib wanaag, atariishadan, qoyskeeda iyo shaqaalaheeda intiisa kale ayaa laga waayay xanuunkan kaddib baaritaan lagu sameeyay.
Xalay oo Isniin ahayd, Sara ayaa barteeda rasmiga ah ee Instagram waxay ku baahisay akhbaarta la xiriirta natiijada caafimaad ee darawalkeeda kaasoo hadda waaxda Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ay u gudbiyeen xarunta karaantiilka.
Sara Ali Kha ayaa barteeda kusoo qortay: “Waxaan jeclaan lahaa inaan idin ogeysiiyo in darawalkeenna laga helay cudurka COVID-19. Waxaan wargelinay BMC-da, waxaana loo kaxeeyay xarun karaantiil.”
“Qoyskeyga, shaqaalaha kale ee guriga iyo anigaba waa nalaga waayay xanuunka, waxaanna qaadaneynaa tilmaamaha lama huraan ka ah. Aniga iyo qoyskeygaba waxaan BMC uga mahad celineynaa caawintooda iyo talooyinkooda. Nabad ahaada dhammaantiin!” ayay sii raacisay qoraalkeeda.
Si kastaba ha ahaatee, Sara Ali Khan ayaa ka soo muuqan doonta filimkeeda xiga ee Coolie No. 1.